Karşıyaka အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Cigli သို့ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
[31 / 10 / 2019] Erciyes ရှိရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောကယ်ဆယ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်း	38 Kayseri
[31 / 10 / 2019] အဘယ်ကြောင့် TCDD စုဆောင်းမှုအင်တာဗျူး၏ရလဒ်ရှင်းပြသည်မဟုတ်လော	06 တူရကီ
[31 / 10 / 2019] ဒါဘီဘူတာဖွင့်လှစ်ခြင်း	41 Kocaeli
[31 / 10 / 2019] Afyonkarahisarlı Tiny ရထားလမ်းကိုလေ့လာသည်	03 Afyonkarahisar
[31 / 10 / 2019] ပါကစ္စတန်ခရီးသည်တင်မီးရထားတစ်စင်းမှာမီးလောင် 65 သေပြီ	92 ပါကစ္စတန်
[31 / 10 / 2019] ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsun Sarp မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့သည်	55 Samsun
[31 / 10 / 2019] Mobile Office Caravan သည် Kandira သို့သွားသည်	41 Kocaeli
[31 / 10 / 2019] ဘယ်အချိန်မှာအစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်မလဲ။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[31 / 10 / 2019] ပင်လယ်နက်သို့ရထားလမ်းသည်Atatürk၏အိပ်မက်ဖြစ်သည်	52 ကြည်းတပ်
[31 / 10 / 2019] CHP Gökerက 'မြန်နှုန်းမြင့်ရထားက Burdur ကိုဖြတ်သန်းမှာလား' ဟုမေးခဲ့သည်။	15 Burdur
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီတူရကီ Aegean ကမ်းခြေ35 IzmirKarşıyaka အစ္စတန်ဘူလ်နှင့် Cigli သို့ဘတ်စ်ကားလိုင်းများ
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 35 Izmir, တူရကီ Aegean ကမ်းခြေ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, တူရကီ 0
ESHOT အထွေထွေညွှန်ကြားမှု၊ 330 နံပါတ်Bostanlı Iskele - Evka3မီတာဘူတာရုံလွှဲပြောင်းစင်တာနှင့် 816 အမှတ်Çiğliဒေသဆိုင်ရာဆေးရုံ - --iğli Transfer စင်တာသည်ခရီးသည်များကိုသယ်ယူရန်ဘတ်စ်ကားလိုင်းများကိုဖွင့်လှစ်ပါမည်။ လိုင်းအသစ်များဖြစ်သောအောက်တိုဘာ 21 သည်တနင်္လာနေ့မှစတင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။
Izmir မြို့တော်စည်ပင်သာယာသည်အများပြည်သူသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုတိုးချဲ့ရန်နှင့်ခရီးသွားလာရေးကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် Izmir ထံမှတောင်းဆိုမှုများကိုအကဲဖြတ်ပေးသောမြို့ပြမြူနီစီပယ်, Karşıyaka နှင့်ğiğli။ 21 အောက်တိုဘာ 2019 အနေဖြင့်Bostanlıİskele - Evka3မက်ထရိုဘူတာလွှဲပြောင်းစင်တာနှင့် 816 ရေတွက်Çiğliဒေသဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးဆေးရုံ - Çiğli Transfer Centre အကြားလိုင်းအသစ်နှစ်ခုကိုစတင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ESHOT ၏အထွေထွေမန်နေဂျာ Erhan Bey ကထိုအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးကြေငြာချက်တစောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင်၎င်းတို့သည်လက်ရှိလိုင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်လိုအပ်သောလမ်းကြောင်းအသစ်များဖွင့်လှစ်ရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။Karşıyaka ဒေသခံများနှင့် muhtars ထံမှကမ်းရိုးတန်းလမ်းကြောင်းမှ Bornova သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်မြင့်မားသောတောင်းဆိုမှုရှိခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်ဆေးရုံများကိုအာရုံစူးစိုက်ထားသောအက်တရှီဟီရပ်ကွက်အတွက်လိုင်းကွင်းတစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပါတယ်။
လိုင်း 330, မော်တော်ယာဉ်ရှစ် 12 မိနစ်မကြာခဏ run လိမ့်မယ်။ Bostanlı Iskele အောက်ပါ Karşıyaka Manavkuyu၊ Bornova ဗဟိုလမ်းကြောင်းသည် Evka3Metro မှတ်တိုင်သို့ရောက်ရန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်မည်။ ကမ်းခြေ၊ Altınyol၊ Adnan Kahveci တံတားလဲလှယ်မှု၊ Symrna ရင်ပြင်၊ Manas Boulevard၊
816 လိုင်းတွင် Cigli ဒေသဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးဆေးရုံနှင့် Cigli လွှဲပြောင်းစင်တာတို့အကြားမော်တော်ယာဉ်နှစ်စီးသည် 15 မိနစ်နှင့်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ ဘတ်စ်ကားများသည်Şehit Ali Karaoğlanအထက်တန်းကျောင်း၊ Kent ဆေးရုံ၊ Ekol ဆေးရုံ၊ Ataşehirအိမ်နီးချင်းနှင့်Çiğli Transfer တို့ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
အေသင်ဘတ်စ်ကားနဲ့ရထားအတွက် Anti-အစိုးရဆန္ဒပြပွဲများကိုမီးရှို့ခဲ့ကြပြီးနောက် 16 / 06 / 2016 အေသင်၌အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများအပြီးတွင်ဘတ်စ်ကားများနှင့် trolleybus များမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်ကအစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲအပြီးတွင်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများအပြီးတွင်အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲများအပြီးဘတ်စ်ကားနှင့်ဘတ်စ်ကားများနှင့်ဘတ်စ်ကားများလောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။
Karşıyaka ဘတ်စ်ကားလိုင်းအတွက်လမ်းရထားလမ်းကြောင်းတည်းဖြတ်ခြင်း 29 / 06 / 2017 Karşıyaka အဆိုပါဓါတ်ရထားလိုင်းဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းအတွက်အစီအစဉ်: Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဆောက်လုပ်ရေးပြီးစီးခဲ့ပါသည် Karşıyaka ဇူလိုင်လမှ စ၍ 1 လမ်းရထား၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်နှင့်အတူဘတ်စ်ကားလိုင်းများနှင့်ဒေသတွင်းမှတ်တိုင်များတွင်အချို့အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဓါတ်ရထားလိုင်းစီမံကိန်း Karşıyaka သိမ်းဆည်းဓါတ်ရထားလိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံစာချုပ်များအတွက်နယူး Developments 11 / 04 / 2012 သမ္မတအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါ Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် "ဖြစ်လိမ့်မည်Karşıyaka နှင့်ဓါတ်ရထားလိုင်းစီမံကိန်း "အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမှဆက်စပ်မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ, Karşıyaka လမ်းရထားလမ်းစီမံကိန်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည့်အစီရင်ခံစာများအခြေခံအဆောက်အအုံ ...
နယူးဒေလီ Metrobus system ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူဌေးနှင့်အတူဆင်းရဲသားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် 11 / 07 / 2012 ဖြေရှင်းချက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တူရကီမှဆောင်ခဲ့သဖြင့်, သို့မဟုတ်အသွားအလာလမ်းကြောင်း၏ကျဉ်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကြောင့်တို့အတွက်ရန်အဖြစ်ဆွေးနွေးမှုအောက်ရှိ Metrobus စီးသောသူတို့အားအလွန်ကျေနပ်မဟုတ်လည်းအိန္ဒိယတွင်အတန်းရုန်းကန်ဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ပါဘူး ...
Izmir Karşıyaka အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းရထားအဖြစ်အိမ်ကြီး! 19 / 09 / 2015 Izmir Karşıyaka အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းရထားအဖြစ်အိမ်ကြီး! : Karşıyakaဒေသခံများကစိတ်လှုပ်ရှားစွာစောင့်ဆိုင်းနေသောလမ်းရထားစီမံကိန်းပြီးဆုံးသွားသောအခါခရိုင်အတွင်းရှိယာဉ်ကြောသိပ်သည်းမှုကျဆင်းသွားပြီးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏သက်တောင့်သက်သာရှိလာလိမ့်မည်။ အများသုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ရထားလမ်းကိုတိုးချဲ့ရန် tozmir Metropolitan Municipality …
နိုဝင်ဘာလ4@ 10: 00 - 11: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - Irmak Zonguldak လိုင်း Km: 370 + 517 (မီးရထား) မြေအောက်ဆောက်လုပ်ရေး
နိုဝင်ဘာလ5@ 10: 30 - 11: 30
တင်ဒါအသိပေးချက် - Irmak Zonguldak လိုင်းကီလိုမီတာ - 378 + 220 တွင်ရေကူးပါ
နိုဝင်ဘာလ6@ 10: 30 - 11: 30
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 1 နိုဝင်ဘာ 1924 Mustafa Kemal Pasha သည်တူရကီ Grand National Assembly ၏အဖွင့်မိန့်ခွန်းတွင်
အဘယ်ကြောင့် TCDD စုဆောင်းမှုအင်တာဗျူး၏ရလဒ်ရှင်းပြသည်မဟုတ်လော
ပါကစ္စတန်ခရီးသည်တင်မီးရထားတစ်စင်းမှာမီးလောင် 65 သေပြီ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Samsun Sarp မီးရထားလမ်းစီမံကိန်းကိုထောက်ပံ့သည်
Bursa Metro အချိန်ဇယား, လက်မှတ်စျေးနှုန်းများနှင့်လမ်းကြောင်းမြေပုံ
Mobile Office Caravan သည် Kandira သို့သွားသည်
RayHaber 31.10.2019 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
CHP Gökerက 'မြန်နှုန်းမြင့်ရထားက Burdur ကိုဖြတ်သန်းမှာလား' ဟုမေးခဲ့သည်။
Bursa ၏အဓိက Arterter အားလုံးအတွက်နေ့နှင့်ညသန့်ရှင်းရေး
Konya Eskisehir မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလက်မှတ်စျေးနှင့်လမ်းကြောင်းမြေပုံ
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 31 အောက်တိုဘာ 1919 အထွေထွေ Milne သည် Cemal Pasha သို့ရောက်သည်
ဘရာဇီးလ် San Paulo Monorail မြေပုံ
တင်ဒါအသိပေးချက် - TÜLOMSAŞ 2020 နှစ်ပတ် ၀ န်းကျင်၊ ပန်းခြံ၊ ဥယျာဉ်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း
နိုဝင်ဘာလ6@ 14: 00 - 15: 00
နိုဝင်ဘာလ7@ 14: 00 - 15: 00
တင်ဒါအသိပေးချက် - Barrier Level Crossing Guard Service ရရှိလိမ့်မည်
နိုဝင်ဘာလ7@ 14: 30 - 15: 30
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဓါတ်ရထားလိုင်းစီမံကိန်း Karşıyaka သိမ်းဆည်းဓါတ်ရထားလိုင်းအခြေခံအဆောက်အအုံစာချုပ်များအတွက်နယူး Developments
နယူးဒေလီ Metrobus system ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးသူဌေးနှင့်အတူဆင်းရဲသားကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်
Izmir Karşıyaka အသစ်တစ်ခုကိုလမ်းရထားအဖြစ်အိမ်ကြီး!
ငါ Fadl နှင့် New တံတား Karşıyaka တိုးတက်မှုအတွက်လုပ်ငန်းခွင်ဆီသို့ဦးတည်
Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဓါတ်ရထားလိုင်းများလုပ်ငန်းKarşıyaka လမ်းရထားလိုင်းကိုစီမံကိန်း၏အခြေခံအဆောက်အဦရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုကအတည်ပြုခဲ့သည်
Uckuyular - Konak - Alsancak - Halkapınar (Mansion) နှင့် Karşıyaka ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းရထားလိုင်းကိုစစ်ဆေးသည်ရန်မျှော်လင့်နေသည်
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 30 အောက်တိုဘာ 1937 နယူးကာတာဘူတာဖွင့်လှစ်သည်
ယနေ့သမိုင်းတွင်: 29 အောက်တိုဘာ 2016
ယနေ့သမိုင်းတွင် - 28 အောက်တိုဘာ 1961 Eskişehirမီးရထားစက်ရုံ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (1) အောက်တိုဘာလ 2019 (609) စက်တင်ဘာလ 2019 (558) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (418) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)
ခန္ဓာကိုယ်ကဏ္ X 1 အတွက် Bursa လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ
နောက်ဆုံးပေါ် Ferrari 488 Challenge Evo အတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသော Pirelli တာယာများ
ရော်ဘာလုပ်ငန်း၏အနာဂတ်ကို IKMIB အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည်
Michelin 1.6 MM သည်တရား ၀ င်ကန့်သတ်ချက်များကိုအာရုံစိုက်စေသည်
Gaziantep Airport 29 ကိုအောက်တိုဘာလတွင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်
Izmir Metro Saatleri, လက်မှတ်စျေးနှုန်းများ၊ စခန်းများနှင့်မြေပုံ
Sabiha GökçenTavşantepe Metro Line ဘယ်တော့ဖွင့်မှာလဲ။
Sao Paulo က Metro မြေပုံ
TÜVASAŞ Booth မှ ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီး Fatih Dönmez
Eskişehirအတွက်အလွန်အရေးကြီးသော YHT ဖွံ့ဖြိုးမှု!